ဘာသာတရားများအား လေးစားတန်ဖိုးထားရေး သင်ခန်းစာသစ်များ ပြင်သစ်စာသင်ကျောင်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားတော့မည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လက်ပံတောင်းမှာ မြေသိမ်း သံစူးကြိုးခွေတွေချ အဲ့နောက်မှာ ကျင်းတူး အဲ့နောက်မှာ တာဖို့ အဲ့နောက်မှာ အစောင့်တွေ ချ ထားတဲ့ပုံလေးတွေမြင်ရတော့
TQ Dr. Maung Zarni and Ko Zargana ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ဒေါက်တာမောင်ဇာနည် ဇာဂနာ »
ဘာသာတရားများအား လေးစားတန်ဖိုးထားရေး သင်ခန်းစာသစ်များ ပြင်သစ်စာသင်ကျောင်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားတော့မည်
ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၅
– ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများအား ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဘာသာတရားများကို လေးစားမှု ရှိသည့် စိတ်ဓာတ်များ ပိုမိုရည်သန်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြင်သစ်ရှိ စာသင်ကျောင်းများတွင် ဘာသာတရားများဆိုင်ရာ သင်ကြားချက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်မည်ဟု သိရသည်။
စာသင်ကျောင်းများမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြား သည်းမခံမှုနှင့် အမုန်းတရားများ ပြန့်ပွားမှုကို တွန်းလှန်ရန် အရေးပါသော နေရာဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ထိုအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြင်သစ် ပညာရေးဝန်ကြီး နာဂျက် ဗာလူ-ဘဲလ်ကာစမ်က The Independent သတင်းစာ သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုအစီအစဉ်အသစ်ရ အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ မှာ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံများ၏ အရေးပါသော ကွဲပြားမှုများအပါဝင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တန်ဖိုးများအကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဒီမိုကရေစီ၏ အရေးကြီးပုံအကြောင်းကို သင်ယူရမည့်အပြင် ဘာသာ တရားများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြား တူညီမှုများနှင့် ကွဲပြားမှုများ အကြောင်းကိုလည်း စာသင်ကျောင်းများတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သင်ကြားပို့ချတော့မည်ဖြစ်သည်။
သတင်းများစုဆောင်းခြင်း၊ ၀ါဒဖြန့်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းကြံစသည့် သီအိုရီများအကြား မတူညီမှုများအကြောင်း သင်ကြားပေးရန်လည်း ပါဝင်ပြီး၊ အစီအစဉ်အသစ်အရ ကျောင်းတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သတင်းစာ၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံ သို့မဟုတ် သတင်းဝဘ်ဆိုက်တစ်ခု ထားရှိရန်လည်း ပါဝင်သည်။
ယူရို သန်း ၂၅၀ ကုန်ကျမည့် အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် လာမည့်စက်တင်ဘာလမှစ၍ ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများမှာ `လောကီရေး ပဋိညာဉ်´ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည့် အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အဆိုပါ ပဋိညာဉ်တွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် လူမျိုးရေးနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားသောအပြုအမူများ၊ အခြားသော အယူဝါဒများနှင့် ဒီမိုကရေစီ၏ လက္ခဏာရပ်များကို မလေးမစားပြုမှုများကို တားမြစ်ထားသည်။
ထို့ပြင် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကို ခွဲခြားထားသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်ရစေရန်အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့အား လာကီရေးရာနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်၍ အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် နိုင်ငံတော်အလံလွှင့်ထူ၍ နိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုမှုကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းတို့လည်း အဆိုပါ အစီအစဉ်သစ်တွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
စာသင်ကျောင်းများတွင် ထပ်တိုးသွားမည့် ဆောင်ရွက်ချက်အသစ်များအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း ယခုပညာသင်နှစ်ကုန်တွင် သင်တန်းများ ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီး ဘဲလ်ကာစမ်၏ အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်အတွက် ပြင်သစ် သမ္မတ ဖရန်ကိုအစ် ဟော်လန်ဒေးက ချီးကျူးခဲ့သည်။ မော်ရိုကိုနွယ်ဖွား ဘဲလ်ကာစမ်မှာ ပြင်သစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး မွတ်စလင် ၀န်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
This entry was posted on January 25, 2015 at 12:24 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.